Ny Ranomasina Peroviana: Ny Ranomasin'i Grau | Vaovao momba ny dia
El ranomasina Peroviana Iray amin'ireo manankarena indrindra eto an-tany izy io. Karazan-dranomasina roa no miara-miaina ao aminy, ny tropikaly iray any avaratra, ary ny rano mangatsiaka mandro ny faritra afovoany sy atsimon'ny firenena. Ankoatry ny habetsaky ny loharanon-karena biby, ny fanambanin'ny ranomasina dia mitazona loharanon-karena mineraly sy angovo manan-danja, izay mbola tsy voarara ny ankamaroany.
Hatramin'ny 1984, antsoina koa ny ranomasina Peroviana Ranomasin'i Grau, ho fanomezam-boninahitra ilay tantsambo lehibe indrindra sy maherifom-pirenena.
Ny harena ao amin'ny ranomasina Peroviana dia azo porofoin'ny Karazana hazandrano 737 izay monina ao. Ny 84 amin'izy ireo dia ara-barotra, fa ny 16 ihany no hararaotina. Karazana mololo 800, karazana crustacea 300 ary biby mampinono 30 no fantatra.
Ny harena ao amin'ny ranomasina mangatsiaka dia vokatry ny be dia be fisian'ny plankton, zavamiaina bitika mikraoskaopy sy zavamaniry izay fototry ny piramida sakafo ao anaty ranomasina. Ny trondro toy ny hazandrano sy ny sardine dia mamelona azy, ary avy eo dia lanin'ny trondro, vorona, ary biby mampinono an-dranomasina lehibe kokoa. Plankton dia manome ny loko Peroviana ny loko maitso.
Ny rano mangatsiaka an'ny Peroviana na Humboldt amin'izao fotoana izao izy ireo dia tsara amin'ny fiainana anaty rano. Ny hatsiakan'ny ranomasina Peroviana no tena tompon'andraikitra amin'ny fahakelezan'ny morontsiraka, satria miteraka dingana iray izay mampihena be ny rotsakorana. Noho io antony io, ny zava-maniry eo amin'ny morontsirak'i Peroviana dia miompana amin'ny lohasaha, amin'ny havoana sasany izay mahazo hamandoana avy amin'ireo zavona, ary any amin'ireo ala maina avaratra.
Fampahalalana bebe kokoa: Lagoons malaza any Però
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Ny Ranomasina Peroviana: Ny Ranomasin'i Grau